स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु, ल्यापटप लुकाउनेदेखि व्यक्तिगत खातामा पैसा राख्नेसम्म – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं, वैशाख ६ । स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। देशभरका ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा औसतमा ७.९० प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इस्टर्न रिजन कपः थाइल्याण्डविरुद्ध सिंगापुर विजयी
सुनकोशीमा २ करोड ५ लाख बढीको खानेपानी योजना हस्तान्तरण
राष्ट्रियसभामा नभए पनि खतिवडालाई अर्थमन्त्री राख्नसक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत छः प्रचण्ड
ब्याक गियर नभएको प्रम ओलीको गाडी कहाँसम्म पुग्ला?
विदेशी मुद्राको आजको विनिमयदर, कुन देशको कति? (सूचीसहित)
कोरियाका नेपालीलाई डाक्टरको सल्लाह- कम्तीमा ८ घन्टा सुत्‍नुस्
अमेरिका र अफगानिस्तानको तालिवान समूहबीच आज शान्ति सम्झौता हुँदै
सनराइज सरल एसएमई कर्जा सञ्चालनमा